प्रायः सोधिने प्रश्न - ड Dong्गगुआन हेन्ग्याओ अल्ट्रासोनिक मेशीनरी कं, लिमिटेड
कसरी पनी बिक्री सेवा छ?
हामी १ वर्षको ग्यारेन्टी र प्राविधिक सहयोग आजीवन प्रदान गर्दछौं। यदि सबै टुक्रिएको छ भने सबै मेसिनको अंशहरू १ वर्ष भित्र निःशुल्क प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ (त्रुटि अपरेसन बाहेक)।
के मेशिन स्थापना गर्न गाह्रो छ?
कामको पसलले पावर र एयर कम्प्रेसर जस्ता पूर्ण सुविधाको तयारी गर्नुपर्दछ। पहिलो स्थापनाको लागि, ईन्जिनियरलाई मेसिन सेट गर्न पठाइनेछ र म्यानुअल निर्देशनको रूपमा लामो मेशिन प्रशिक्षण गर्न। थप समस्याहरू बाहिर आउन को लागी हामी भिडियो निर्देशन पनि प्रदान गर्न सक्दछौं।
टी / टी, अर्डर अघि %०% जम्मा, ढुवानी अघि %०% ब्यालेन्स भुक्तान।
मेशिन नेतृत्व समय के हो?
मानक मेशिनहरूका लागि, हामी 30० दिन भित्र वितरण गर्न सक्दछौं। यदि यो ग्राहक (OEM) द्वारा अनुकूलित छ भने, नेतृत्व समय -5 45--55 दिनहरू हुन्छ।